कोलोनाभाइरसको कारण विश्व बैंकको महामारी बन्ड लगानीकर्तालाई के हुन्छ? - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
कोलोनाभाइरसको कारण विश्व बैंकको महामारी बन्ड लगानीकर्तालाई के हुन्छ?
मार्च 16, 2020 मार्च 15, 2020 क्रिस्टिना किटोवा अफ्रिका, बन्धन, व्यापार, सम्पादकको पिक, ग्लोबल विश्व, समाचार लेख
विश्व बैंकले संक्रामक रोगहरूको प्रकोप भएमा विकासोन्मुख देशहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन विश्वको पहिलो "महामारी" बन्धन र डेरिभेटिभ राखेको छ।
डब्ल्युबीको महामारी बन्ड जारी गर्ने निर्णय इबोला महामारीको नतीजा हो।
महामारी बन्ड परिपक्वता मिति जुलाई १,, २०२० हो।
कोरोनाभाइरस (COVID19) दैनिक समाचारहरूमा रहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले आधिकारिक रूपमा COVID १aलाई महामारी घोषणा गर्‍यो। भाइरसले संक्रमितमा सुरु एथलीटहरू, चलचित्र ताराहरू, एक dpolitician सामिल छन्। भाइरस बाट संक्रमित व्यक्तिको संख्या बढ्न जारी छ। अहिलेसम्म असंख्य राष्ट्रहरूले यात्रा निलम्बन गरेका छन्। विश्व बैंकले संक्रामक रोगहरूको प्रकोप भएमा विकासोन्मुख देशहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन विश्वको पहिलो “महामारी” बन्धन र डेरिभेटिभ राखेको छ।
विश्व बैंक एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था हो जसले पूँजी परियोजनाहरु पछ्याउनको लागि तेस्रो विश्वका देशहरुका सरकारहरुलाई loansण र अनुदान प्रदान गर्दछ। यो दुई संस्थाहरू मिलेर बनेको छ: पुनर्निर्माण र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बैंक, र अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ। WB मुख्यालय वाशिंगटन DC मा छन्
पुनर्निर्माण र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बैंक १ 1944 .XNUMX मा स्थापना भएको एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था हो। यो विश्व बैंक समूहको ndingण दिने हात पनि हो। आईबीआरडीले मध्यम आय भएका विकासोन्मुख देशहरुलाई loansण प्रदान गर्दछ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था हो जसले तेस्रो विश्वका देशहरुलाई रकम loansण र अनुदान प्रदान गर्दछ।
एउटा अद्वितीय संरचनाले ओभर-द-काउन्टर डेरिभेटिभहरूसँग जारी बन्डहरूबाट रकम एकत्रित गर्दछ जसले महामारी फैलिने जोखिमलाई व्युत्पन्न लेनदेनमा काउन्टरहरू पक्षमा हस्तान्तरण गर्दछ। विश्व बैंकले यो संरचना लगानीकर्ताहरूको विविध समूहलाई आकर्षित गर्न प्रयोग गरिएको दाबी गर्‍यो। त्यस्ता बन्धनहरूको सबैभन्दा ठूला धारकहरू जापानी र जर्मन सरकारहरू हुन्।
विश्वव्यापी महामारीको बन्धन जारी गर्ने निर्णय २०१ 11,000 मा गुयना, लाइबेरिया, सियरा लियोन र पश्चिमी अफ्रिकाका अन्य देशहरूमा ११,००० मानिस मारिएको इबोला महामारीको नतीजा हो। त्यस समय डब्ल्यूबीले अनुमान गरेको थियो कि देशहरूमा पहुँच भएको भए मर्नेको स 2013्ख्या% ०% कम हुने थियो। भाइरसको प्रसारको प्रारम्भिक चरणमा कोष। समग्र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले इबोला महामारीसँग लड्न करीव $ अर्ब डलर खर्च गरेका छन्। जोखिम व्यवस्थापन सम्भावितबाट, जोखिम नियन्त्रणहरू कार्यान्वयन गर्न, यस्तो बन्धनहरू सिर्जना गर्न यो एक राम्रो विचार हो।
WB B 320 मिलियन जुटाउन सक्षम थियो। डब्ल्यूबीले तीन बर्षे mat २२225 मिलियन र $ million मिलियनको परिपक्वताका साथ ondsणपत्रहरूको दुई श्रृंखला राख्यो। विश्व बैंकले विपन्न देशको महामारीबाट जोगाउन $ १० करोड डलरको प्रस्ताव राख्यो। बॉन्डको भुक्तानी नयाँ फ्लू वा कोरोनोवायरस, जस्तै सार्स, एमईआरएस को प्रकोप को घटनामा निलम्बन हुनेछ। उक्त आयोजना विश्व बैंकले २०१ 95 मा सिर्जना गरिएको विशेष कोषमा हस्तान्तरण गरिसकेको थियो - महामारीको स्थितिमा आपतकालिन उपायहरूको लागि वित्त पोषण गर्ने संयन्त्र महामारी आपतकालीन वित्तीय सुविधा पीईएफ हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले COVID १aलाई महामारीको रूपमा घोषणा गर्दै यसको समय लिएको छ। डब्ल्यूएचओ कुनै पनि प्रकारको भाइरसलाई एलिभेटेड स्थितिमा घोषित गर्नमा धेरै सतर्क छ। तथापि, बढ्दो कोरोनाभाइरसको प्रकोपको कारण, डब्ल्यूबी बॉन्ड किनेका लगानीकर्ताहरूले लाखौं अमेरिकी डलर गुमाउनुपर्नेछ किनभने डब्ल्यूएचओले यसलाई महामारीको रूपमा लेबल लगाएको छ। डब्ल्यूबी बॉन्डहरू यस्तो शर्तमा बेचिन्थ्यो कि उनीहरूमा लगानी गर्नेहरूले लगानी गुमाउनेछन, यदि कोरोनाभाइरस लगायत छवटा घातक महामारीमध्ये कुनै पनि देखा पर्‍यो भने। जुलाई १ 19, २०२० को बॉन्ड परिपक्वता मिति भन्दा पहिले महामारी नहुने हो भने लगानीकर्ताहरूले उनीहरूको मूल बांडको लागि भुक्तानी गरेको पैसा फिर्ता पाउन सक्थ्यो, साथै उनीहरूले खरीद मिति र बीचमा प्राप्त गरेको बाँन्डमा ब्याज र प्रीमियम तिरेको थियो। बन्डको परिपक्वता मिति।
शेयर बजारमा सबैभन्दा नराम्रो असरको अलावा सीओवीआईडी ​​१ also ले पनि यस्तो बन्धनमा वैश्विक लगानी मेटाउन गइरहेको छ।
सांप्रदायिक समाचार कोरोनाभाइरस कोभिड 19 आर्थिक निवेश महामारी बन्धन विश्व
आइरिस मान्यता बजार भविष्य सुरक्षित देखिन्छ
आईओटी कार्यान्वयनको लागि सफ्टवेयर सम्पत्ति प्रबन्धन बजार महत्वपूर्ण